Iinkonzo ze-China Baron OEM kunye ne-ODM (IiNkonzo zeeleyile ezenziwe ngentando) Ukwenziwa kunye neFektri | IBaron
Ibhulukhwe yoQeqesho lwaBantwana
Unonophelo lwabantu abadala
Ibhulukhwe yabantu abadala
Ingxowa ye-Diaper ehlaziyiweyo
Inkonzo ngentando yakho
I-OEM kunye ne-ODM
Ukunyamekelwa kwezilwanyana zasekhaya
Inkonzo yeBaron ye-OEM kunye ne-ODM (Inkonzo yeelebheli eyenzelwe wena)
I-Baron ngumvelisi kunye nomnikezeli weentsimbi ophezulu wase China, sijonge abasasazi kwihlabathi liphela, kwaye nelebheli yabucala yenkonzo yeeleyibheli yabucala ikwabonelelwe. Sinamandla okwenza imveliso kunye nomatshini olungileyo we-diaper.
· Ilweyile lomntwana
· Ibhlukhwe yoQeqesho lwaBantwana kunye nePull-up Ibhlukhwe yebhlukhwe
· I-Eco ilweyile
· Ibhulukhwe ye-diaper ye-Eco
· Ilweyile yaBadala
· Ibhulukhwe yabantu abadala
· Iblukhwe yeLady Diaper
· Ilady Napkin
· Ukusula kwabantwana
· Ukucoca i-Eco
IBaron (China) Co. Ltd yafunyanwa ngo-2005. Inkampani ibonelela ngoluhlu olupheleleyo lweenkonzo kubandakanya nophando ngemveliso kunye nophuhliso, uyilo, imveliso epheleleyo yesikali, ukuthengisa kunye neenkonzo zabathengi, kwaye banegama elomeleleyo lokugqwesa kumgangatho wemveliso, izinto ezintsha kunye iinkonzo zabathengi ngelixa zikwazi ukuhlala zibonelela ngexabiso elifanelekileyo kubathengi bethu.
U-Baron wakhe izibonelelo ezisemgangathweni kunye neworkshop ehlangabezana nemigangatho yamanye amazwe kunye ne-8 imigangatho yokuvelisa ilweyile ephezulu kakhulu. Inkampani isebenzisa izixhobo zemveliso zeHengchang kunye neHanwei, ezizezona mveliso zokwenza imveliso ephezulu e China. Izixhobo zinobunzima obuyi-100T kwaye ziqinisekisa uzinzo lweemveliso zeBesuper. Imveliso yangoku yonyaka zizigidi ezingama-800 zeepcs, ezilingana ne-3300 40HQ izikhongozeli.
U-Baron uqeshe iingcali zophando kunye nophuhliso, abanamava eminyaka engama-20 kumzi-mveliso we-diaper. Inkampani inamalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezulu kwama-23 kumanabukeni kwaye ihlala izinikezela kwizinto ezintsha zokuvelisa ilweyile lomntwana elisemgangathweni ophezulu.
Okwangoku, uBaron ufumene izatifikethi ze-BRC, i-FDA, i-CE, i-BV, kunye ne-SMETA yenkampani kunye ne-SGS, i-ISO kunye nesiqinisekiso se-FSC seemveliso.
IBaron igubungela indawo yeemitha zesikwere ezingama-33,050, kunye nendawo yokwakha engama-29,328.57 eemitha zesikwere. Ngaphezulu kwama-90 amawaka m³ yokugcina acocekileyo kwaye acocekile axhotyiswe ngenkqubo yokulwa umlilo kunye nenkqubo yokungenisa umoya ukuqinisekisa ukhuseleko lweemveliso. Uyilo lwendawo yokugcina luhamba ngokungqongqo kwimigangatho yokuhlolwa komzi-mveliso we-BRC kunye ne-BV. Indawo yokuhambisa engaphezulu kwe-4000 yeemitha zesikwere inokuhlala kwiitreyila ezili-10 ngaxeshanye.
Umthengisi weMathiriyeli yeHlabathi
UBaron uhlawula kakhulu umgangatho wezinto ezisetyenziswayo. Inkampani idibana nabanikezeli ngeempahla abaninzi abakhokelayo, kubandakanya iSumitomo, i-BASF, i-3M, iHankel kunye nezinye iinkampani zamazwe angama-Fortune 500.
IZiko loLawulo loMgangatho
U-Baron wenze uvavanyo kuzo zonke izinto ezingavunyelwanga, kunye neemveliso ezigqityiweyo ngexesha nasemva kwemveliso ukubeka esweni umgangatho wemveliso ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni. Okwangoku, iinkqubo zenkampani zolawulo lomgangatho kunye nolawulo ziye zaqinisekiswa ngabantu besithathu bamanye amazwe, kubandakanya i-BRC, i-FDA, i-CE, i-ISO 90012008. Zonke izixhobo zovavanyo ziyahlolwa ngabantu besithathu abagunyazisiweyo kube kanye ngonyaka.
Namhlanje, u-Baron wenze inkqubela phambili kwiimveliso zobuchwephesha, kubandakanya amanabukeni e-bamboo fiber, i-diapers ezimilise i-T, ii-diapers ezisisiseko esincinci, ezi mveliso ziyahlangabezana neemfuno zabathengi kunye nemigangatho yabo yentengiso. I-diaper ye-eco-biodegradable baby diaper ephuculwe yinkampani ithathwa njengeyona inqanaba liphezulu lokuhlaziywa kwezinto ezikhoyo emhlabeni kwaye ikwathandwa kumazwe aphuhlileyo afana ne-USA, UK, POLAND, AUSTRAILA njl.
Ubuhlakani bexesha elide
Kule minyaka idlulileyo, u-Baron uzibophelele ekubeni ngumthengisi ophambili kwihlabathi labantwana abanabileyo kunye nokubonelela ngexabiso elikhethekileyo kumaqabane ethu, ngaloo ndlela esenza imeko yokuphumelela kumashishini nakubathengi.
Egqithileyo I-OEM / i-ODM yeFektri yokuLala okuLala-iBesuper Bamboo Planet yabantwana abaThinta-iBaron
Okulandelayo: I-Besuper Bamboo Planet yabantwana
umenzi wenabukeni owenziwe ngokwezifiso
Umzi mveliso weLweyile
I-Eco Tsala ibhulukhwe ye-diaper
Iblukhwe yeLady Diaper
tsala ibhlukhwe ye-diaper
Ilweyile Banokubulawa, Ukufakwa kwi-Super diabor yabantu abadala, Umgangatho ophezulu we-Eco diaper, I-Diaper esanda kuzalwa, Ukusula kwabantwana kulusu olubuthathaka, Umntwana olilitha,
Ilweyile Banokubulawa, Ukusula kwabantwana kulusu olubuthathaka, I-Diaper esanda kuzalwa, Umgangatho ophezulu we-Eco diaper, Ukufakwa kwi-Super diabor yabantu abadala, Umntwana olilitha,